LERIVA MANAHIRANA : TSY MANDRAY ANJARA AMIN’NY FIFIDIANANA NY ANKOLAFY RAVALOMANANA RAHA TSY TONGA I DADA – MyDago.com aime Madagascar
LERIVA MANAHIRANA : TSY MANDRAY ANJARA AMIN’NY FIFIDIANANA NY ANKOLAFY RAVALOMANANA RAHA TSY TONGA I DADA
Ny Ankolafy Ravalomanana hoy ny Cst Leriva Manahirana androany teny amin’ny Magro Behoririka dia mandray baiko avy amin’ny filoha Ravalomanana Marc. Ny baiko voalohany miainga dia avy aminy. Izaho hoy Leriva avy any Brickaville dia tsy tonga eto raha tsy ny Ankolafy Ravalomanana. N’inon’inona hoy ity mpanao politika ity zava-mitranga na hevitra mivily eto Madagasikara dia aza mba manary ny akoho tamana an-trano. Ny antsika hoy izy dia miaraka hatrany rehefa misy mahafaly sy maha ory. Averiko eto hoy Leriva ny tenin’ny filoha Ravalomanana Marc tany Bel’air ny maraina hoe Na fifidianana filoham-pirenena na solombavam-bahoaka dia raha tsy tonga i Dada dia tsy afaka misoratena toa voatango. Raha misy mandehandeha any hoy izy dia amin’ny anaran’ny tenany manokana. Noho izany dia manao antso avo amin’ny fikambanana iraisam-pirenena ny Ankolafy Ravalomanana fa tsy mandray anjara amin’ny fifidianana filoham-pirenena na solombavam-bahoaka raha tsy tonga eto ny filoha Ravalomanana Marc. Misy olona mandehandeha any hoy Leriva ka na amin’ny anaran’ny Ankolafy na tsia dia diso làlana izy manao izany. Izay te handeha dia afaka mandeha any. Mbola mafimafy ny tolona ataontsika hoy ity olomboantendry avy any Brickaville ity fa aza mieritreritra ho vita ho azy ny tolona. Mila manova toe-tsaina, sy miezaka isika satria marobe ny hery avy any ivelany manosika antsika amin’ny fifidianana tsy mandeha amin’ny laoniny. Noho izany hoy Leriva dia mila mihetsika sy miray hina tsara isika. Tsy tafavoaka hoy izy ity tolona ity raha tsy mihetsika. N’inon’inona fifidianana ataontsika dia tsy fahombiazana no azontsika.
Auteur Solo Razafy*Publié le 20 mars 2013 21 mars 2013 Catégories Politique
6 pensées sur “LERIVA MANAHIRANA : TSY MANDRAY ANJARA AMIN’NY FIFIDIANANA NY ANKOLAFY RAVALOMANANA RAHA TSY TONGA I DADA”
« Raha misy mandehandeha any hoy izy dia amin’ny anaran’ny tenany manoka » Hoy Marc Ravalomanana
Dia aho ana fotsiny izany ireny fitsidiahana tany atsinanana sy tany atsy ana ireny ? Ny olona anie Tonga foana vao mahare hoe « Ravalomanana » e. Dia izany ve hararaotina ? Sa koa misy baiko miafina tsy fantantsika any ?
Izao anefa, Alep,ihany a hetsika ny olona mba hohitan’izao ton tôle izao hoe i Marc Ravalomanana ihany no,safidin’ny Malagasy. Ny hatahorako fotsiny ireo mpitarika sao maka ny toeran’i Dada.
Izany ka mba miha-mazava ny resaka ! Misy tsy ampy kely azafady, koa dia miala tsiny fa mba arosoko ny hevitro !
Mila mihetsika sy miray hina tsara isika, ary ATAO MAZAVA TSARA AMIN’NY VAHOAKA NY TANJONA REHETRA TIANA HO TRATRARINA, ARY INDRINDRA NY FOMBA REHETRA HAHATONGAVANA AMIN’IZANY TANJONA IZANY !
Fa mba inona avy ireo tanjona, ary atao miaraka amin’iza avy ? Ny fiverenan’ny Filoha no tena zava-dehibe, fa izay ihany ve no voasoratra ao anatin’ilay tondrozotra ?
20 mars 2013 à 17 h 25 min
Hafa kely indray ity sary alefanao Ra-Solo a !? 🙂
Ny tsy handraisan’anjara aloha no tena tadiavin’ny foza rehetra, sy ireo mpisolelaka ! Tsy vaovao izany satria efa fantatra hatry ny ela, fa dia izay ve no ho valin-kasasàran’ny vahoaka, izay niaritra ny tsy azo tononona rehetra ?
Efa tsy atahorana intsony izany ry Lazalazao fa efa IZAY MIHINTSY NO TETIKA a!!
ireo mpisolelaka ireo no asolo an’i dada satria efa tsy azo ahilika ny fitiavan’ny vahoaka
an’i Dada dia ireo no FITAOVAN’i FOZA vao2,dia ireny izy efa MITETITENY FOANA ! MILAZA NY TSY HANONTANIANA
ireny, mitonon-tena toa lolo fotsy, sady nampisehoan’i Kotovelo tsara fa TSY NAHAFALY AZY MIHINTSY NY FAHATONGAVAn’i
TSY MAINTSY HITSINGEVANA IHANY ILAY MALOTO NAVALAN-DRANO e!!!rehefa mitsingevaeva ao anatiny ao ilay izy
tsy maintsy MIVOAKA IHANY, TSY VOATANA INY REHEFA FENO ny KAPOAKA.
TANY MASINA IO FA IZAY MANAO RATSY AO HO VIZANA!!!TSY MAINTSY HO TSARAIN’NY TANTARA EO DAHOLO !!!
Dia gaga aho fa mitaky ny hanantanterahina ny Tondrozotra;Kanefa manao propangande ihany,,?
Précédent Article précédent : VPM Botozaza Pierrot : nitsidika tany Betsizaraina, distrikta Mahanoro
Suivant Article suivant : FILOHA RAVALOMANANA : AMPIHARO NY TONDROZOTRA, TSY FENO NY FEPETRA AMIN’NY FIFIDIANANA